Burcada South Afrikaan ah oo Bilowday Dhac Nuuc Cusub ah iyo Soomaalida oo lasoo daristay Cabsi Xoogan - iftineducation.com
iftineducation.com – Dalka Koonfur Afrika ay kunool yihiin Kumanaan Soomaali ah oo u badan dad ganacsiyo kala duwan ku leh ayaa mar walbo waxa sii kordha dhibaatooyinka dalkan kula kulmaan, haba ugu darnaatee Dilalka Dhaca ioyo Boobka.
Burcada Madowga ah ee u dhashay Dalka Koonfur Afrika ayaa hada bilaabay dhac nuuc cusub ah ay ku dhacayaan kuna boobayaan Goobaha Ganacsi ay Soomaalidui ku leeyihiin Dalkan Koonfur AFrika.
Kooxo Burcad ah oo watay dareeska Ciidanka iskana soo dhigay Booliis ayaa xalay Weeraray mid kamid ah Dukaamada ee Soomaalidu ku leedahay Deegaanka Yanga oo katirsan Magaalada Cape Town iyagoona halkaasi ka qaatay guud ahana alaabihii iyo lacagihii yaalay.
Burcadan ayaan ku wargalisay dadkii joogay Dukaanka in ay yihiin Booliis Alaabtana ay ka qaadayaan dukaanka maadaama ay sharci daro ku ganacsanayeen ,sidaana ay gawaari kaga buuxsadeen alaabtii dukaanka taalay sida uu inoo sheegay mid kamid ah Ragii joogay Dukaankaasi.
Ganacsatada kunool Magaalada Cape Town ayaan walaac xoogan ka muujisay arintaasi iyagoo ka cabsi qaba dhaca nuucaan cusub ah in uu saameen badan ku yeesho Dukaaman kale oo kuyaala Deegaanka Yanga iyo guud ahaan Deegaanada hoostaga Magaalada Cape Town.